Wejigii Hore Ee Diiwaangelinta Hargeysa Oo Si Rasmi Ah U Soo Xidhantay – | Berberatoday.com
Wejigii Hore Ee Diiwaangelinta Hargeysa Oo Si Rasmi Ah U Soo Xidhantay –
Hargeysa(Berberatoday.com)–Masuuliyiinta sar sare ee gudida komishanka doorashooyinka qarank Somaliland oo ay waheliyaan musuuliyiinta axsaabta qaranka Somaliland ayaa sheegay in la soo gunaanaday wejigii hore ee diiwaangelintii caasimadda Hargeysa iyo degmada Salaxley.
Shirjaraa’id oo ay guddigu doorashadu shalay qabteen, waxay ku dhawaaqeen in wejigii hore oo ahaa 14 maalmood oo xidhiidh ahi uu soo gabagaboobay, kuna dhammaaday jawi nabadgelyo, “Waxaanu ku dhawaaqaynaa in wejigii koowaad uu degmada Hargeysa ka soo dhammaadya 14-kii cisho ee xidhiidhka ahaa ee diiwaangelintu socotay. Alle ayaa maahdleh waxay noogu soo dhammaatay nabadgelyo, Jimcihii ayuu dhammaaday.” sidaas ayuu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Md. Cabdiqaadir Iimaan Warsame.
Marwo Kaltuun Sheekh Xasan oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa iyaduna sheegtay oo tilmaantay goobaha degmada Hargeysa lagaga tagay in la iska diiwaangeliyo mudada u hadhay diiwaangelinta, maadaama oo uu wejigii hore ee rasmiga ahaa dhammaaday.
Xubno u hadlay xisbiyada qaranka ayaa ammaanay diiwaangelinta ka socotay caasimadda Hargeysa iyo weliba qaabka ay diiwaangelintu uga soo qabsoontay gobaladii hore.